Ubucwebe nezintelezi factory - china ubucwebe nezintelezi abenzi nabaphakeli
Izipho Ezicwebezelayo ezihileleka ezintweni ezenziwe ngobuciko zensimbi kusukela ngo-1984. Ubucwebe bethu nezintelezi zethu zihlelwe njengezindandatho, amacici, imigexo, namasongo, amacici, izintelezi, izintelezi zewayini, izintelezi zocingo, izifinyezo. Ungahlola amaqoqo ethu amangalisayo ukuthola ukukhuthazwa bese wenza ukwakheka kokufanekisa ubuntu. Ucezu ngalunye lwalugqokisiwe futhi lupholishwe kahle ngekhwalithi eqinisekisiwe. Thumela umlayezo wakho ngendlela oqonde ngayo, sizokwakha isikhunta ukuze sizibeke ezintelezini, sithembe ukuthi into encane izokwenza ukucwebezela kwethu okuhle kujwayelekile. Specifications: ● Okunamathiselwe: intambo ngezinto ezahlukahlukene, amasongo, umgexo, iketanga. ● Idizayini: 2D noma i-3D noma i-cubic ephelele, impahla, ukuma, usayizi, imibala eyenziwe ngezifiso ● MOQ: 100pcs ● Ukupakisha: i-polybag, isikhwama se-velvet, ibhokisi lesipho, ibhokisi lesikhumba.
Ukuphrinta kwe-UV Metal Charms Keychains
Abaphethe Amacici / Abaphethe Izindandatho